Meydka Xildhibaan Xaabsade oo maanta lagu aasay magaalada Baydhabo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Waxaa maanta magaalada Baydhabo laguy aasay Xildhibaan Maxamed Ibraahim (Xaabsade) oo shalay subax arroortii ku geeriyooday magaalada Muqdishom balse loo qaaday gobolka uu kasoo jeeday ee Baay.
Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, maamulka Koonfur-galbeed, siyaasiyiin, iyo ehelka marxuumka ayaa ka qeybgalay aaska.
Sii-haya xilka wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda Soomaaliya, Aadan Maxamed Nuur (Saransoor) ayaa ka tacsiyeeyay geerida marxuum Xaabsade oo uu ku tilmaamay inuu ahaa shakhsi ku weyn bulshada deegaannada Koonfur-galbeed Soomaaliya.
Wasiirka ayaa geerida marxuumka uga tacsiyeeyey ehelada, qaraabada iyo umadda Soomaaliyeed ee uu ka tagey marxuumka, wuxuuna Alle uga baryey inuu janadiisa ka waraabiyo.
Wasiirka amniga ee maamulka Koonfur-galbeed Soomaaliya, Cabdifataax Maxamed Ibraahim (Geeseey) oo ka hadlay aaska ayaa sheegay in Xaabsade uu ahaa shakhsi ay waqti badan wada shaqeeyeen, wuxuun ku tilmaamay inuu ahaa nin ay ka go’neyd midnimada ummadda Soomaaliya.
Amaanka magaalada Baydhabo ayaa si weyn loo adkeeyay intii lagu guda jiray aaska. Waxaa saacado kooban la xayiray dhaqdhaqaaqa dadka iyo ganacsiga magaalada.